किन रहस्यमय लाग्यो सुशील कोइरालाको मृत्यु ? यस्ता छन् शंकाहरु - Nepali Virals
किन रहस्यमय लाग्यो सुशील कोइरालाको मृत्यु ? यस्ता छन् शंकाहरु
२७ माघ २०७२, बुधबार ०९:१३	4,158 पटक-पढिएको
क्यान्सर समेत जितेका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एक्कासी मृत्युको खबर सुन्दा मंगलबार बिहान धेरै नेपाली अचम्मित बने । न बिरामीको हल्ला थियो न त कुनै दुर्घटना नै । त्यसैले पनि धेरैले पत्याएनन तर नपत्याई सुखै भएन ।
ठूल्ठूला अस्पतालहरुको नजिक बस्ने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मृत्यु घरमै भएपछि यति बेला उनको मृत्युमाथि शंकै शंका उब्जिन थालेका छन् । यति मात्र होइन उनलाई ओढाइएको सिरक र उनको निधारमा समेत रगतको दाग देखिएपछि शंकाले लंका जलाउने प्रमाण मिलेको छ ।
निधारमा लगाएको चन्दन टिकाले रगतको दाग छोपिएको देखिन्छ भने सिरकमा प्रष्ट रातो दाग देखिन्छ । कोइरालाको निधनको बिषयमा उनका निजी चिकित्सक, उनीसँगै बस्ने भाञ्जा लगायतका आफन्तहरुको बयान सुन्ने हो भने धेरैले अनुमान लगाउन सक्छन, कोइरालाको निधन जति आश्चर्यमिश्रित बन्यो, उति नै रहस्यमय पनि । किनकी उनीहरु बिचका कुरा पनि बाझिएका छन् ।
७९ वर्षीय कोइराला विगतमा क्यान्सर रोगी थिए । बुढ्यौली उमेरसँगै उनलाई क्रोनिक ब्रोङकाइटिस थियो । यसबीचमा निमोनिया पनि भएको उनका निजी चिकित्सक डा. करबीरनाथ योगीले बताएका छन् । घरमै उनलाई अक्सिजन दिएर राखिएको डा. योगीले बताएका छन् । उनका अनुसार कोइरालालाई इनजेक्सनबाट एन्टिवायोटिक दिइएको थियो । इन्जेक्सनबाट एन्टिवायोटिक दिनु गम्भीर स्वास्थ्य अवस्ताको द्योतक भएको कतिपय चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
कोइरालाले केही दिनदेखि हिँडडुल गर्न छाडिसकेका थिए । टाढाका जिल्ला पुग्न नसके पनि काठमाडौंको जिल्ला अधिवेशनमा समेत उनी जान सकेनन् । यसबाट उनको स्वास्थ्य कस्तो भइसकेको थियो भन्ने प्रष्टिन्छ । स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएको सार्वजनिक भएमा महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न र चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने ध्येयले उनलाई अस्पताल लगेर उपचार नगरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।कांग्रेस महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य स्थिति गुपचुप राख्ने प्रयास गरिँदा कोइरालाको घरमै निधन भयो ।
त्यसो त उनको निधनसंगै सामाजिक संजालमा शंका उपशंका र आक्रोशले भरिए । अन्नपूर्णपोष्टमा लामो समयदेखि अपराध बिटमा कार्यरत सुवास गोतामेले फेसबुक स्टाटस पोस्ट गर्दै लेखेका छन्–‘कुरो खोजको विषय छ । पुर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राति मृत्यु भयो । उनलाई किन अस्पताल लगिएन ? कि उनको रेखदेख पुगेन । कि अस्पताल लैजान आवश्यक ठानिएन। बिरामी थिए भने किन समयमा अस्पताल पुर्याइएन ? यो खोजिको अनुसन्धानको बिषय छ । अकस्मात भित्र कुनै षड्यन्त्र त छैन ? शंका गर्न सबैलाई छुट छ ।’
पत्रकार तथा लेखेक नरेन्द्र जंग पिटर फेसबुकमा लेख्छन् ‘काग्रेस महाधिवेशनकाे पूवर्सन्ध्यामा भएकाे काेइर्रालाकाे मृत्यूले अनेकाैँ जिज्ञाशा र अासंका जन्मार्इदिएका छन । राजनीति क्रुर हुन्छ, देखिएका भन्दापनि नदेखिएका पक्षहरू धेरै हुन्छन् ‘ । यति भन्दै उनले ६ प्रश्न गरेका छन् । हेर्नुस उनका प्रश्न :
१) त्याे अभेध्य किल्ला कुन थियाे, जस्ले अाफना नेताकाे विग्रएकाे स्वास्थवारे जनता र मिडियाले पनि चुँसम्म थाहा पाँउन सकेन ? राज्यले उँहाको स्वास्थलार्इ कराेडाैँ तखर्च गरिसकेकाे थियाे, याे अवस्थामा किन उहाँलार्इ सुविधा सम्मपन्न अस्पताल लगिएन ?
२) अशक्तताकाे वाबजुद किन उहाँलार्इ नै सभापतिकाे उमेदवार बन्न विवस गरार्इयाे ? अवकाे नेपाली काग्रेसकाे बाटाे के ? के काेइरालापरिवारवाट काग्रेसी नेतृत्व अन्त सर्नेकालकाे याे पूर्वसन्ध्या नै हाे ?
३) निवर्तमान प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षदलकाे प्रमुख नेताकाे स्वास्थवारे सरकार जानकार त थियाे ?
४) साेसल मिडियामा भार्इरल भएकाे र अनलाइर्इन मिडियाले समाचार बनाएकाे उनकाे टाउकाकाे चाेट र सिरकमा रहेकाे रगतकाे दाग के, कसाे हाे ?
५) मूलधारका छापा मिडियामा यत्राे ठूलाे खवर कसरी अाँउन सकेन ? (नेपाली पत्रकारिताकाे हैसियत)
६) भूकम्पपछि थिलथिलाे भएकाे, हिमपात र ठंडी झेलीरहँदा लाखाैँलार्इ असर, हजाराैकाे मृत्युकाे कारक बनेकाे नाकावन्दीकाे दाेषी भारतिय सत्ताले एकाएक काेर्इरालामृत्युमा देखार्इएकाे श्रषृषीमनभित्र खवरभित्रकाे खवर र अासय मानवियता नै हाे त ?
पत्रकार, लेखक तथा अधिबक्ता समेत रहेका स्वागत नेपालले पनि घटनालाई छानबिन गर्न पर्ने इंगित गर्दै भनेका छन् ‘ ज्ञानेन्द्रलाई भातृशोक पर्दा शंका गर्नेहरु माथि पनि शंका गर्न पाउनु पर्छ’ ।
त्यस्तै अर्का संचारकर्मीले सुशील कोइरालाको मृत्यु हो कि हत्या भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
अर्का एक पत्रकार लेख्छन् ‘सुशील कोइराला केही दिन देखि निमोनियाले सिकिस्त थिए भने किन अस्पताल पुर्याइएन ?? सुशीलको मृत्यु हो कि हत्या ? छानबिन हुन जरुरी छ !’
हेर्नुस फेसबुकका अन्य पोस्ट
ट्वीटरमा पनि यहि बहस ।
यद्दपी कोइरालाको पारिबारिक स्रोतले भने उनको मृत्यु प्राकृतिक नै भएको बताउदै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । यस बिषयमा थुप्रै अनलाइनहरुले समाचार सामग्री प्रकाशन गरेका छन् ।
बिजशालामा प्रकाशित यो समाचार पढ्नुहोस : सुशील कोइरालाको निधन रहस्यमय ! भाञ्जा र निजी चिकित्सकको बयान बाझियो
सकारात्मकमा प्रकाशित यो समाचार पढ्नुहोस : कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति लुकाउन अस्पताल लगिएन
अघिल्लो पानीको बोतलबाट सजिलै बन्छ १५ थरि समान (दंग पार्ने भिडियो)
पछिल्लो नायिका नेहाको हत्या प्रकरण: ‘ब्रा’ किन माथि सारियो ? कालो सल कहाँबाट आयो ?